News banyere LG: malite, mobiles, mbadamba, mgbọrọgwụ na ndị ọzọ - Androidsis | Gam akporo (Peeji nke 2)
A na-eme LG Wing ka ọ bụrụ onye ọrụ na igwefoto nwere ike iweghachite yana enyo abụọ: otu n'ime ndị a bụ rotatable
LG Wing bu ama ohuru nke emeputara ya na igwefoto a na-achota ya na uzo abuo; otu n'ime ndị a na-agbagharị.
LG gosipụtara "Wing" dị ka aha maka ekwentị ihuenyo ya abụọ
Ekwentị dị iche iche akpọrọ Wing na LG ga-eweta na Septemba 14 iji gosi anyị nkọwa niile.
LG ewebatala ama ọhụụ maka etiti, nke na-abịa dịka LG Q92 ma jiri Snapdragon 765G kwadoro ya.
LG K31 bụ ekwentị ọhụrụ dị ọnụ ala nwere igwe foto abụọ yana ngosi HD +
LG K31 bụ obere arụmọrụ ọhụụ na-arụ ọrụ na Android 10 na Mediatek's Helio P22 chipset.
Anyị na-agwa gị nkọwa niile nke LG Velvet ọhụrụ, ekwentị dị elu sitere na onye nrụpụta Korea nke egosiputara na arụmọrụ dị elu.
LG Q92 5G gafere Google Play Console
LG Q92 5G gafere Google Play Console na-egosi nkọwapụta teknụzụ mbụ ya. Ọ ga-abụ etiti nke na-achọ ịdị ọnụ ala karịa LG Velvet.
Igwefoto nke LG V60 ThinQ 5G abụghị ihe kachasị mma ma hapụ ọtụtụ ihe a ga-achọ [Nyochaa]
Ejirila ndị ọrụ DxOMark nwalere LG V60 ThinQ igwefoto. Ha kwubiri na odighi mma.
LG Velvet nwere Snapdragon 845 gosipụtara site na Geekbench
Ihe dị iche nke LG Velvet ọhụrụ gosipụtara na Geekbench, ọ na-eme ya na CPU dị iche na ịbụ ụdị LTE ezubere maka ahịa na-enweghị njikọ 5G.
LG bundles ya site na ya kacha ọhụrụ na sexist ad mkpọsa. Gbụ ahụ na-ere ọkụ!
LG amalitela mgbasa ozi mgbasa ozi na ọdịnaya nwoke na nwanyị nwere nnukwu mmetụta na netwọkụ. Anyị na-agwa gị nkọwa.
LG Q61: Ebe ntanetị ọhụrụ nwere igwe foto anọ yana nnukwu ogwe 6,5 ″
LG ekwuputala ekwentị Q61 ọhụrụ, onye nọchiri LG Q60, nke ga-abịarute ma emesịa n'ọnwa a na ọnụego asọmpi ziri ezi.
Echiche bụ imeziwanye nlele nke ọdịnaya ọdịnaya na ahụmịhe egwuregwu sitere na ekwentị LG nwere ihu abụọ, otu n'ime ha na-agbagharị.
LG gosipụtara site na nkwupụta mgbasa ozi na ọ ga-amalite ịnakwere iwu ịtụ maka akara ọhụụ LG Velvet taa.
LG Velvet bụ ama ọhụụ nke onye nrụpụta South Korea gosipụtara wee bupụta ma gosipụta Snapdragon 765G chipset.
Isi atụmatụ nke LG Velvet na Snapdragon 765 chipset agbaala. Ọnụ ego ya na ụbọchị mmalite ya apụtawokwa.
LG Velvet: Vidiyo ọhụụ gosipụtara ọhụụ na ọ na-abịa Snapdragon 765
LG enyela anyị ọhụụ ọhụrụ nke ngwaọrụ Velvet na-abịa. Ọ bụ ekwentị dị n'etiti etiti nwere ọmarịcha mma.
LG G7 ThinQ ji obi ụtọ anabata mmelite ngwanrọ ọhụrụ nke na-agbakwunye nkwado maka VoWiFi.
LG weghachite LG chọkọleti ya nke ọma
LG ga-eweta na 2020 ekwentị ọhụụ nke dabere na LG chọkọleti na-abụghị nanị ya meriri n'ahịa ihe karịrị afọ 15 gara aga
LG Velvet bụ aha ọhụrụ ahọpụtara maka ekwentị na - esote gị
LG mara ọkwa Velvet, ya ọzọ ngwaọrụ ndị ọzọ karịa smartphones ugbu a na ahịa, niile ịkụ nzọ na a "dị iche iche" imewe.
LG ekwuputala ekwenti ohuru maka Japan nwere aha Style3, onye nchikota nke ga abia site na June.
LG na-ekwuputa mgbanwe mgbanwe dị ukwuu maka LG G9
Ndị ụlọ ọrụ LG adịla kemgbe ọtụtụ afọ n'ọtụtụ mpaghara teknụzụ. Na mpaghara smartphone mgbe niile ...
LG G9 ThinQ bu n’uche gha abuo ya na SoC Snapdragon 765G
Ihe omuma ohuru banyere LG G9 ThinQ na-egosi na smartphone agaghi abia na Snapdragon 865, kama ya na Snapdragon 765G.
A na-ekwupụta ọkwa LG Q51: Igwefoto atọ na igwe okwu stereo
LG eweputala ngwaọrụ ohuru nke ana akpo Q51. Ekwentị na-ezute atụmanya ma hazie maka ahịa Korea.
LG ekwuputala V60 ThinQ 5G ọhụrụ, ekwentị mkpirisi ihu ga-abịa na nhazi Snapdragon 865 dị ike.
LG W10 Alpha, ọhụrụ ọnụ ala-arụmọrụ ala arụmọrụ ugbu a ukara
LG na-abanyekwa na mpaghara nke obere ama ama. Ọ na-eme nke a ugbu a site na W10 Alfa ọhụrụ, ụdị dị mma.
Di na nwunye esere ese nke LG V60 ThinQ abiala ma gosiputa otutu isi ihe nke smartphone.
N'ihi coronavirus, LG kagburu ọbịbịa ya na MWC 2020
Companylọ ọrụ Korea nke LG ezigarala ozi mgbasa ozi banyere ndị na-abịaghị na MWC 2020
Unlock Unlock LG G8 ThinQ ka kwesiri Android 10
Uzo a na - emeghe nke LG G8 ThinQ dị elu na - enweta mmelite gam akporo 10 na United States.
Companylọ ọrụ ahụ anaghị a attentiona ntị na ụdị ndị ọzọ ezuru ala ma ọ bụ ihe ziri ezi na LG anaghị ere n'ihi enweghị ọchịchọ.
LG G9 ThinQ, kedu ihe anyị ga - atụ anya na flagship na - esote
LG G9 ThinQ na-ere ọkụ tupu usoro ngosipụta ya. Companylọ ọrụ ahụ ahụla ozi banyere isi mmiri ya.
LG ọkwa Android 10 update maka 9 nke smartphones ya
Mmadu itoolu ama ama LG ga-enweta mmelite gam akporo 10, dịka ọkwa ọkwa nke ụlọ ọrụ ahụ mere.
Mmelite gam akporo 10 na-agbasawanye maka LG G8 ThinQ
LG G8 ThinQ ama ama ama na-enweta ugbu a gam akporo 10 melite na US site na iji ndozi.
E depụtara nkọwa LG W20 na nchekwa data Google Play Console
Ihe ndekọ data Google Play Console edepụtara ụfọdụ atụmatụ na nkọwapụta teknụzụ nke LG W20.
Stable gam akporo 10 amalitela ibute LG V50
LG V50 na-anabata mmelite a ugbu a na-agbakwunye sistemụ arụmọrụ nke Android 10 n'ụdị ya kwụsiri ike.
Ekwentị LG ọhụụ pụtara na Geekbench: ọ nwere ike ibata dị ka LG K43
Igwe nyocha Geekbench etinyela ndepụta ọhụrụ na nchekwa data ya, nke nwere ike daba na LG K43.
LG na-atụ anya ị nwetaghachi ahịa nkewa mkpanaka na 2021
LG na-ezube iji nwetaghachi ọtụtụ ahịa furu efu na nkewa mkpanaka site na njedebe nke 2021. A na-atụ anya nnukwu ama si ika ahụ na 2020.
Ihe ndị a gosipụtara atụmatụ nke LG G9 ThinQ
A usoro nke ikpe egosiwo atụmatụ nke LG G9 ThinQ, nke ga-apụta ìhè maka ịnwe onye na-agụ akara mkpịsị aka na kamera 4.
LG G9 na-egosi na quad igwefoto nsụgharị
Akpa nsụgharị nke LG na-esote flagship, G9, na-leaked. Ihe niile na-egosi na ọ ga-ahụ ọkụ na MWC afọ a.
LG Neon Plus isi ekwentị leaks
Ihe ngosi nke ekwentị ọzọ site n'aka onye nrụpụta LG apụtawo. A ga-akpọ ya LG Neon Plus ma chọọ ka ekpughere ya n'oge CES 2020.
LG V60 ThinQ 5G ga-ekwuwapụta na MWC 2020
LG ga-amalite onye nọchiri anya V50 ThinQ 5G na Mobile World Congress 2020 na Barcelona. Companylọ ọrụ ahụ ga-ekwupụta V60 ThinQ 5G.
LG G7 Otu na-anata gam akporo 10 melite
LG G7 Otu na-enweta mgbe ogologo oge melite kachasị mkpa nke gam akporo, mbipute 10. Ọnụ a rutere n'ahịa na 2018.
LG G8X ThingQ na ulo oru ya na Spain
Chọpụta ihe banyere mwepụta nke LG G8X ThinQ ọhụrụ site na akara Korea nke enwere ike zụrụ eze na Spain ugbu a.
Ihe omume LG beta nke gam akporo 10 ga - amalite na ngwụcha ọnwa Ọktọba, edepụtarala ọtụtụ ama ama.
LG mara ọkwa na beta nke gam akporo 10 ga-erute ọtụtụ n'ime ya mobiles ekele ya preview omume nke ga-amalite na njedebe nke October.
Verizon's LG V30 na-emesị nweta gam akporo
Onye nọ n'ọkwá dị elu nke Verizon, LG V30 na-enweta ngwanrọ ngwanrọ nke na-agbakwunye sistemụ arụmọrụ gam akporo.
Dabere na nchọpụta na-adịbeghị anya, a ga-ejikọ 5 inch LG G Pad 10.1 smart tablet na Qualcomm's Snapdragon 821 chipset.
E gosipụtara LG G8X ThinQ na IFA 2019, chọpụta nkọwa ya zuru ezu n'isiokwu a.
LG Stylo 5 dị ugbu a na United States maka ọnụahịa anyị na-ekpughe ugbu a. Mara ya!
Chọpụta nkọwa zuru ezu nke LG Q70, ọhụụ dị n'etiti akara Korea nke enyerelarị n'ihu ọha.
LG K40S na LG K50S: Usoro ntinye nke ika ahụ
Chọpụta ihe niile gbasara LG K40S na K50S, ụdị ndị nwere akara dị ala nke ụdị Korea a na-emegharịrị ọhụrụ ma ewepụlarị ha n'ihu ọha.
LG V60 ThinQ ga - abata na ihu onyunyo
Chọpụta karịa maka ihu igwe abụọ a LG V60 ThinQ ga-enwe mgbe ọ ga-ebido na Septemba na IFA 2019 na Berlin.
Chọta ihe niile gbasara LG G8X ThinQ, ekwentị ọhụụ ọhụụ kachasị ọhụrụ na akara Korea, nke aga-eweta n'ihu ọha na IFA 2019.
A kwadoro LG K50 na Spain
Chọpụta karịa gbasara mwepụta nke LG K50 na Spain ebe anyị nwere ike ịzụta ya na gọọmentị, dịka ekwuputala ya.
LG iji gosi ekwentị abụọ na ihuenyo na September
Chọpụta karịa maka ngosipụta nke ekwentị nwere ihu abụọ nke LG ga-eweta na Septemba dịka ha kwuputara.
LG bu patenti a foldable smartphone ya na stylus
Chọpụta karịa patent LG nke gosipụtara anyị mpịachi ama na pensụl na ọ nwere ike ịbụ ezigbo nhọrọ n'ahịa.
LG na-aga n'ihu na-eweta ọnwụ na nkeji nke abụọ
Chọpụta karịa maka LG dara ogbenye na nkeji nke abụọ nke afọ na-efunahụ ego ọzọ na ekwentị azụmahịa.
LG K20 na LG K30: Ọdịdị ọhụrụ nke ika ahụ
Chọpụta ihe niile gbasara LG K20 na K30, njedebe ọhụrụ nke akara Korea nke ewebatalarị na Italytali ma ga-abịa n'oge na-adịghị anya.
LG V30 malitere ịnata mmelite ya na A gam akporo
Chọpụta ihe gbasara mmelite ahụ na A gam akporo nke na-amalite ibute ọkwa na LG V30 na ụfọdụ ahịa ụfọdụ.
LG X2 2019 gosipụtara na ngosipụta nka na njirimara ya teknụzụ
A pịa foto e leaked na-egosi na niile nkọwa nke imewe na e ji mara nke LG X2, LG ọzọ ọnụ ala ekwentị.
LG arụworị ọrụ na V60 na V70 wee debanye aha ha
LG na-aga n'ihu na-arụ ọrụ na njedebe ọhụrụ ya ma debanye aha V60 na V70 na South Korea na ha ga-abata na ahịa site na 2020.
LG gaara edebanye aha ọhụrụ nke ekwentị
Choputa ihe banyere LG M10 nke akara Korea edebanyego dika o gha aputa ibuputa igwe ohuru na ahia.
LG debara aha G10, G20, G30 na G40 maka ekwentị ndị na-abịanụ
Chọpụta karịa aha LG debara aha maka ekwentị ya na-abịanụ ga-amalite n'afọ ọzọ.
Chọpụta nkọwa niile nke LG Stylo 5 nke akara a gosipụtara na United States. New ala-ọgwụgwụ na stylus.
Chọpụta ihe niile gbasara mwepụta nke LG G8s ThinQ Smart Green na Spain nke bụrịrị gọọmentị dịka akara ahụ n'onwe ya ekwupụtala.
Choputa ihe nile banyere LG W10 ohuru, W30 na W30 Pro ohuru ohuru nke LG n’adabere na India n’ile anya.
LG na-eji ihu ọma ekpuchi ihu na-eji ekwentị mbụ ama ama
Patlọ ọrụ Patent nke Turkey enyela LG Electronics patent maka ama ama nwere kamera ihu ka etinyere n'ime oghere na ihuenyo ahụ.
LG W10 gosipụtara na gam akporo gam akporo yana ekpughere ọtụtụ nkọwa ya
Edebanyela LG W10 na Google's Android Enterprise program data maka azụmahịa tinyere ụfọdụ nkọwa ya.
A na-arụ ọrụ LG V50 ThinQ 5G na Spain
Choputa ihe banyere nbuputa ndi oru LG V50 ThinQ 5G na Spain, ebe Vodafone bidoro ya n’ahia.
LG W10 ga - abụ ekwentị ụdị maka India
Chọpụta ihe banyere LG W10, ekwentị izizi nke akara Korea ga-ebupụta naanị na India na obere oge.
LG V50 ThinQ 5G igba egbe nwere ike na-egbu oge ọzọ
N'ihi ụfọdụ nkwekọrịta nkwekọrịta chipset LG na-enwe na Qualcomm, mwepụta nke V50 Thinq 5G nwere ike ịga n'ihu na-egbu oge.
A na-ahụ LG Stylo 5 tupu mmalite ya
LG Stylo 5 dị nso na ịmalite ọkwa ya na ahịa. Ngwaọrụ ahụ abụrụla ihe osise ọhụụ ọhụụ nke a na-ahụ ya kpamkpam.
LG G7 melite gam akporo achịcha na Europe
Chọpụta ihe maka mmelite ahụ na A gam akporo nke emechara rụọ ọrụ maka LG G7 ThinQ na Europe, ebe etinyere ya na mba ụfọdụ.
LG na-arụ ọrụ na ekwentị naanị maka India
Chọpụta karịa gbasara LG ekwentị izizi ga - ebupụta naanị na India ma ga - adị n’ahịa.
Chọpụta ihe banyere mwepụta nke LG Q60 na Spain nke ndị ụlọ ọrụ Korea mara ọkwa ya.
LG D8 ThinQ enyochala DxOMark na nyocha ya bu n’ile anya. Akara akara ọnụ ahụ adịghị mma.
Chọpụta karịa JerryRigEnwale ntachi obi ọ bụla nke LG G8 gafere ma gafee ule a na agba agba.
Chọpụta karịa maka ọnụahịa LG V50 ThinQ 5G a ga-enwe na mbido ya na South Korea. Na mgbakwunye na ụbọchị ntọhapụ ya.
LG na-amalite imelite LG V35 na gam akporo
N'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na ụlọ ọrụ Korea adịghị LG bụ nhọrọ maka ọtụtụ nde ndị ọrụ na ...
LG X4 2019: Ọkwa ọkwa ọhụụ ọhụrụ dị ọhụrụ
Choputa ihe banyere LG X4 2019 ohuru, ekwenti ohuru ohuru site na akara Korea nke egosiputara n'ihu ndi mmadu.
Choputa ihe banyere ama ohuru nke LG kwadoro nke nwere onu ahia isii, ato n’otu aka, dika ikwuru.
DxOMark eweputara mmelite ya na LG V40 ThinQ nyochaa nke na-emeri akara zuru oke nke ekwentị nwetara ụbọchị ole na ole gara aga.
Chọpụta ihe banyere LG patent a nke anyị nwere ike ịhụ mpịachi na transperent smartphone na-arụ ọrụ na abụọ.
A na-arụ ọrụ LG K40 na Spain
Chọpụta ihe gbasara mwepụta nke LG K40 na Spain, ebe ọ ga-ekwe omume ịzụta ekwentị ika a.
LG na-akwado mgbe gam akporo achịcha ga-enweta njedebe ya
Chọpụta karịa banyere ụbọchị nke LG ga-ebido mmelite a na Android Pie na njedebe ya dị ka ha gosipụtara na ọkwa.
LG V50 ThinQ 5G ọnụahịa na mbupute gosipụtara na Korea
Choputa ihe banyere onu ahia na ubochi mmeputa nke LG V50 na South Korea dika ulo oru ya n’azu egosiputala n’iru.
LG K12 +: Ama ama ama ọhụụ ama ama ama ama ama ama ama
Chọpụta karịa LG K12 +, ekwentị ọhụụ abanyela n'ahịa ahụ, nke ewepụlarị n'ihu ya.
LG G8 ThinQ ga-ere na United States site na Eprel 11: iwu tupu amalitelarị
LG ka kwuputara na ekwentị ọhụrụ ya, LG G8 ThinQ, ga-adị site na Eprel 11 na United States.
LG V50 5G: LG nke mbụ 5G ama ama na vidiyo
Choputa ihe banyere nkowa nke LG V50 5G, ohuru ohuru nke Korea nke nwere 5G nke emere na MWC 2019.
Chọpụta ihe banyere LG G8 ThinQ, njedebe ọhụrụ nke akara Korea nke akọwapụtara nkọwapụta ya na MWC 2019.
Chọpụta ihe banyere nkọwa nke LG Q60, ụdị ọhụụ ọhụụ ọhụụ a na-abịa na igwefoto nwere okpukpu atọ.
Chọpụta karịa LG ọhụụ dị n'etiti, LG K40 na LG K50 nke egosiputala n'ihu ọha.
LG agaghị ewepụta ama atụ mpịachi ama n'oge a
Chọpụta ihe banyere atụmatụ LG na folda ekwenti ya, nke na-aga ichere oge ruo mgbe a tọhapụrụ ya na ụlọ ahịa.
Ngosipụta nke LG V50 ThinQ 5G na-ekpughe ọdịdị ya niile: ọ ga-ekwe omume ụbọchị ịwepụta ga-egosi
LG na-akwadebe ịmalite V50 ThinQ 5G na ụbọchị ole na ole sochirinụ. A na-enyefe ya apụtawo ya kpọmkwem ụbọchị na oge a ga-ahazi ya.
Onye ọrụ: LG G8 ThinQ ga-enwe Crystal Sound OLED gosipụtara na teknụzụ ụda
LG ga-ebuputa ama ozo ya, LG G8 ThinQ, n'oge Mobile World Congress (MWC 2019) na njedebe ...
Ihe ohuru ohuru nke LG G8 ThinQ na-eme ka ọdịdị nke flagship niile pụta
Ihe ohuru ohuru nke LG G8 ThinQ abiala n’igwe. Onye a n’egosiputa uzo nile nke ekwenti ma kpughee ya.
Tupu mwepụta nke LG G8 ThinQ, ọnụ ahịa ndị Canada akwụgogoro. Dabere na nchọta ahụ, ọ ga-adị oke ọnụ.
Wepụtara nkọwa na n'ihu imewe nke LG K12 +
Ebumnuche nke LG K12 + agbapụtawo site na ntụgharị, yana isi nkọwapụta ya dị mkpa.
LG G8 ThinQ ga-enwe igwefoto ToF n'ihu na njirimara ihu 3D
LG kwadoro na flagship ya na-esote, G8 ThinQ, ga-akwadebe ihe mmetụta 3D ToF maka selfies. Ihe ndi ozo n'okpuru.
Ee, LG ga-aga n'ihu na nkewa mkpanaka ya n'agbanyeghị oke ọghọm o nwere
LG Electronics CEO Qiao Yujin ekwuola na ụlọ ọrụ ahụ agaghị ahapụ nkewa mkpanaka ya n'oge ọ bụla.
Ngalaba mkpanaka LG nwere ọnwụ nke $ 700 nde na 2018
Nsonaazụ nke LG's mobile division, maka otu afọ ọzọ, emeela ọtụtụ ọnụọgụ, mana n'agbanyeghị nke a, ụlọ ọrụ ahụ na-aga n'ihu ịkụ nzọ na ya
LG, onye na-emepụta ihe n'oge na-adịghị anya ịmalite igwe nwere ọkwa mmiri
Ihe omuma ohuru ohuru weputara ihe omuma nke ulo oru South Korea LG na aru oru na mweputa nke ngwaọrụ nwere akara mmiri.
LG V50 ThinQ 5G ga-ekwuwapụta na MWC 2019 n'okpuru ụgbọelu Sprint
LG nwere ike na-eme atụmatụ igosipụta ụfọdụ ngwaọrụ ọhụụ maka usoro 'G' na 'V' na MWC 2019 na Barcelona: LG G8 na V50 ThinQ 5G na-echere.
Chọpụta ihe gbasara mmalite ọrụ nke LG V40 ThinQ na Spain ebe ọ ga-abata na ụbọchị ole na ole.
Autofocus anaghị arụ ọrụ n'ọtụtụ LG dị elu na ọnọdụ ARCore: Google kwadoro
Seemslọ ọrụ ARCore autofocus yiri ka enweghị usoro na ụdị LG flagship dị iche iche. Google gosiputara nke a.
Mgbe anyị ka na-eche teknụzụ 5G, LG na-akwadolarị maka netwọkụ 6G
Companylọ ọrụ South Korea LG amalitela itinye atụmatụ iji kwadebe maka teknụzụ 6G. Ọ ga-abụ otu n’ime ndị isi na ngalaba ahụ.
LG iji mechie azụmaahịa ekwentị ya na Philippines: ọ na-aga n'ụzọ nke Sony na HTC?
N'ime ọtụtụ ọkwa nke smartphones na teknụzụ ndị na-eduga, LG na-atụ anya ịkwụsị ọrụ na ngalaba mkpanaka na Philippines.
Kwadoro nhazi nke LG G8 ThinQ, na ihe ijuanya na ihuenyo ya?
A na-agbapụta akwụ ụgwọ nke na-akwado atụmatụ nke LG G8 ThinQ nke ga-apụta maka igwefoto ya n'ihu site na ịnwe ihe mmetụta maka ihu ihu.
LG akwadebe a mobile maka MWC na i nwere ike iji na-enweghị imetụ ya
Ọ bụ na MWC 2019 nke a ga-eme na Barcelona na ọnwa na-abịa mgbe anyị nwere ike ịhụ ekwentị LG enwere ike iji ya na-emetụghị ya aka.
Ndepụta ekwentị LG ndị na-aga imelite gam akporo achịcha
Chọpụta ndepụta nke ekwentị LG nke ga-emelite gam akporo Pie n'ime afọ a dị ka ụlọ ọrụ ahụ si kwuo.
LG G7 ThinQ na-amalite mmelite na gam akporo achịcha
Chọpụta ihe banyere ntọhapụ nke mmelite gam akporo nke amalitelarị ịgbagharị na LG G7 ThinQ na South Korea.
LG V20 na G5 agakwaghị enweta mmelite
LG V20 na G5 smartphones agaghịzi enweta ngwanrọ, nche ma ọ bụ mmelite ndị ọzọ. Anyị na-agbasawanye gị!
LG Q9: A na-emegharị etiti LG
LG Q9: Nkọwapụta, ọnụahịa na mwepụta gọọmentị. Chọpụta ihe banyere LG ọhụrụ n'etiti-nso ekwentị n'ihu ọha kpughere.
LG G8 ga-eji teknụzụ dị na Onyo ihuenyo daa n'ahịa ahụ
Akuko ohuru gosiputara na LG ga eweputa LG G8 site na onodu onyo onyo. Samsung na-arụ ọrụ na nke a maka otu n'ime ekwentị ya n'ọdịnihu.
LG na-ekwuwapụta Mwepụta nke gam akporo gam akporo maka LG G7 ThingQ
Ndị ọrụ nke LG G7 ThinQ ga-enwe ike ịnụ ụtọ mmelite nke gam akporo achịcha na njedebe ha naanị n'okpuru otu izu.
LG ga-amalite mpempe akwụkwọ ọhụrụ na nkeji iri na ise nke afọ
Chọpụta ihe banyere mbadamba ụyọkọ ọhụrụ LG na-arụ ọrụ ma na-atụ anya ịmalite na nkeji iri na ise nke 2019.
Imelite LG G7 ThinQ na gam akporo 9 ga-abụ eziokwu n'oge na-adịghị anya
LG ekwuputala na n'oge na-adịghị anya anyị ga-enwe ike imelite LG G7 ThinQ na ụdị kachasị nke sistemụ arụmọrụ Google. A gam akporo 9 achịcha dị ebe a!
LG na-ekpughe mmemme 2019 ya
Chọpụta ihe banyere atụmatụ LG iji wepụta ekwentị ọhụrụ na ahịa na ọnwa mbụ nke 2019 na nkọwa izizi gbasara ya.
Nke nta nke nta anyị na-amụta nkọwa ọhụrụ banyere ọkọlọtọ ndị ọzọ nke nnukwu ndị nrụpụta ga-ahụ ọkụ ...
Etu ibudata ma wụnye ọdụ ụgbọ mmiri Pixel 3 n'ọtụtụ igwe LG
Google Pixel 3 Igwefoto igwefoto dị ugbu a maka ụdị LG dị iche iche. Anyị na-akọwa otu esi ebudata ma wụnye ya.
Nke a bụ otú LG si ezube iji nwetaghachi nsonaazụ dara ogbenye nke nkewa mkpanaka ya
LG ekpebiela ime mgbanwe na nkewa ekwentị iji tugharịa ahịa nke smartphones, nke gbadatala kemgbe ọtụtụ afọ.
Ekwentị nwere igwe foto 16? LG dị ka patenti
Chọpụta ihe banyere patent LG a nke anyị na-achọta ekwentị nwere mkpokọta igwefoto 16 iji wepụta foto site n'akụkụ niile
LG Q9, ndị nsụgharị a na-akwado atụmatụ ya
Agbanyela ihe ngosi nke gosiputara LG Q9, nke ohuru ohuru nke onye na emeputa Korea nke enwere ike igosi ya na MWC 2019.
LG G7 Fit rutere na Spen na gọọmentị
Chọpụta ihe banyere mbata nke LG G7 Fit a na Spain, ọnụahịa nke ọ ga-enwe ike ịzụta yana nkọwa ya.
Ekwentị mpịachi LG nwere ụbọchị ngosi
Chọpụta karịa maka ụbọchị ekpughere ekwentị ekwentị mpịachi LG nke na-eme na CES 2019 na Jenụwarị.
LG V40 ThinQ bụzị onye ọrụ ugbu a: Ngosipụta dị elu nwere igwe foto ise
LG V40 ThinQ: Nkọwapụta, Ahịa na Mwepụta. Choputa ihe nile banyere ohuru ohuru nke akara Korea egosiputara na nke a.
LG V40 ga - ewepụta na Ọktọba 4
LG ga-ewebata LG V40 na Ọktọba 4 na South Korea. Chọpụta karịa maka ngosi ụbọchị nke ika ọhụrụ elu-ọgwụgwụ nso.
A malitere LG Q Stylus Plus na India na ihuenyo 18-inch 9: 6.2
LG Q Stylus + ka malitere na India maka ọnụahịa Rs 21.990. Mara ihe niile banyere mbata nke ngwaọrụ a na mba India.
LG G7 Otu: LG nke izizi gam akporo otu ekwentị
LG G7 Otu: LG LG mbụ nwere gam akporo One dị ka sistemụ arụmọrụ. Chọpụta ihe banyere ekwentị ọhụrụ a site na akara Korea.
LG weputara Ikuku ekweisi na bọtịnụ maka Google Assistant
LG weputara bọtịnụ maka Google Assistant na ekweisi ọhụrụ ya. Chọpụta ihe banyere ekweisi ikuku ndị a na LG.
LG na-arụ ọrụ na ekwentị 5G maka afọ ọzọ
LG ga-ebido ekwentị 5G mbụ ya na ọkara nke mbụ nke 2019. Chọpụta ihe banyere atụmatụ ụlọ ọrụ Korea na ụdị a.
LG Q8 (2018): Nkọwapụta, ọnụahịa na mwepụta nke etiti. Chọpụta ihe banyere etiti ọhụrụ nke akara Korea.
LG V20 malitere ịnata mmelite ya na gam akporo Oreo
N'ime afọ abụọ gara aga, na mgbe ọdịda ekwentị modular nke ụlọ ọrụ ahụ mebiri, ọ dara n'ihe banyere ahịa n'ihi na echiche ahụ dị nnọọ mmelite nke LG V20 na gam akporo Oreo na-aga ịre ahịa, mgbe nnweta mbụ ya na South Korea.
LG Q7: LG n'etiti etiti ọhụrụ rutere Spain
LG Q7 ka emeputara na Spain. Chọpụta ihe gbasara mbata ụlọ ọrụ ọhụrụ nke ụlọ ọrụ gọọmentị na Spain
Mmelite kachasị ọhụrụ nke LG G7 na-enye anyị ohere ịdekọ vidiyo na 4k na 60 fps
LG's flagship G7 ga-enweta mmelite nke ga - enyere ya aka ịdekọ vidiyo na 4k na 60 fps
LG Stylo 4: nke mbụ gam akporo Otu ụlọ ọrụ siri ike na-abịa na Snapdragon 450
LG emeela LG Stylo 4 onye ọrụ gọọmentị, South Korea nke mbụ nwere gam akporo One, sistemu arụmọrụ nwere nkwado sitere na Google ozugbo LG Stylo 4 bụ onye ọrụ. Ngwaọrụ a bụ nke izizi gam akporo otu n’ime ụlọ ọrụ ahụ, ọ na - eji Snapdragon 450 nwere isi asatọ. Mara ya!
LG ga-arụ ọrụ na LG Q7 na gam akporo Otu
LG ga-ewepụta ụdị LG Q7 na gam akporo One.Chọtakwuo banyere atụmatụ ụlọ ọrụ na ụdị a na-abịa United States.
Njirimara na nkọwapụta teknụzụ nke LG X5 (2018) ọhụrụ. Mara ha!
N'ime awa ole na ole gara aga, LG ejiri nwayọ kwupụta LG X5 (2018), ngwaọrụ ọhụụ nke abanyela n'ime katalọgụ nke LG ekwuputala awa ole na ole gara aga LG X5 (2018), ngwaọrụ ọhụrụ nke ika ahụ. Akara a ka tinyeworo n'ime katalọgụ South Korea.
LG Q Stylus, Stylus Alpha na Stylus Plus: Ebe ntanetị dị na pensụl
LG Q Stylus, Stylus Alpha na Stylus Plus: Nkọwapụta na Mwepụta. Chọpụta ihe banyere ekwentị ọhụrụ ahụ dị n'etiti etiti na-egosiworị.
LG V35 ThinQ bụzi gọọmentị: Mara nkọwa ya
LG V35 ThinQ: Nkọwapụta, Ahịa na Mwepụta. Chọpụta karịa nke ika ọhụrụ ọhụrụ-elu na-ama ama e eze n'ihu.
LG Q7, LG Q7α na LG Q7 +: A na-emegharị etiti LG
LG Q7, LG Q7α na LG Q7 +: Nkọwapụta, ọnụahịa na mwepụta. Choputa ihe banyere uzo ohuru di iche-iche nke LG ka ekpughere taa.
Ọkọlọtọ LG ọhụrụ, LG G7 ThinQ bụ nzọ ụlọ ọrụ Korea ka ị gbalịa, a ...
Budata akwụkwọ ahụaja LG G7 ThinQ
Ọ bụrụ n ’ị na-achọ akwụkwọ ahụ aja nke LG G7 ThinQ ọhụrụ ahụ, anyị ga - egosi gị akwụkwọ ahụaja na - ekewaghị ekewa nke 33 sitere na aka nke ọkọlọtọ ọhụrụ nke ụlọ ọrụ Korea.
LG G7 ThinQ: Thelọ ọrụ dị elu ugbu a bụ ọkwa gọọmentị
LG G7 ThinQ: Nkọwapụta, ọnụahịa na mwepụta gọọmentị. Chọpụta ihe banyere njedebe dị elu nke akara Korea nke ewepụtalarị n'ihu ọha.
LG gosipụtara njirimara nke ihuenyo G7 ThinQ
LG gosipụtara njirimara ngosi nke ọbịbịa G7 ThinQ na-abịanụ
LG K11 na K9: entryzọ ntinye ọhụrụ nke ụlọ ọrụ ahụ rutere Europe
LG K9 na K11: Nkọwapụta, ọnụahịa na mwepụta gọọmentị. Chọpụta ihe banyere akara ala nke akara ahụ na-achọ imegharị ọkwa ha.
Dabere na OnLeaks, ụlọ ọrụ Korea nke LG ga-eweta LG G7 Thinq n'ihu ọha na Mee 2 na New York.
LG weputara mbiputa puru iche nke V30 Plus nke sitere na manga JoJo's Bizarre Adventure
Na Machị 23, ụlọ ọrụ Korea ga-ere ire LG V30 Plus pụrụ iche, yana nkọwa nke usoro manga JoJo's Bizarre Adventure
LG X4: Usoro ntinye ọhụụ ọhụrụ nke ika ahụ
LG X4: Nkọwapụta nke ọkwa ọkwa ọhụụ ọhụrụ. Chọpụta ihe banyere ekwentị ọhụrụ ahụ nke amalitegoro na South Korea.
LG na-eweta K10 na K10 Plus, njedebe abụọ dị ala
LG ụlọ ọrụ Korea ewepụtala ọhụụ ọhụrụ abụọ na MWC maka njedebe dị ala nke ahịa: LG K10 na LG K10 Plus
LG V30S ThinQ, nke ọhụrụ V30 nwere nke kacha mma nke AI gosipụtara na World World Congress
Otu ihe ịtụnanya na-atụghị anya ya nke mere na Mobile World Congress nke na-agba ọsọ kemgbe February 25 na obodo Barcelona, ​​Spain, bụ ngosipụta nke LG V30S ThinQ, nke ọhụrụ V30 kachasị mma. nke ọgụgụ isi nke aka na ọtụtụ ndozi na anyị ga-nkọwa.
LG K8 na LG K10 2018: A na-emegharị ọnụ ala dị ala na ike ka ukwuu
LG K8 na LG K10 2018: Nkọwapụta, ọnụahịa na mwepụta. Chọpụta ihe banyere ekwentị ọhụrụ dị ala site na akara Korea.
LG ga-eweta LG G7 n’etiti afọ
Asịrị ndị kachasị ọhụrụ metụtara LG G7 na-egosi na ọnụahịa nke ihe atụ a nwere ike ịhụ ìhè n'etiti afọ, ọkachasị n'ọnwa June na mmemme onwe ya.
LG V30 nwere agba pink dị na Spain site na echi
LG V30 dị na pink dị na Spain site na echi. Chọpụta ihe banyere ụdị ọhụrụ a nke ekwentị dị elu na pink.
LG na-apụ ahịa ekwentị ndị China
LG ụlọ ọrụ Korea ga-emechi ọfịs nkewa nke telefoni na China, na-ahapụ mba ahụ kpamkpam, na-egosi na ọ nwere ike ọ gaghị abụ obodo mbụ ebe ụlọ ọrụ ahụ kwụsịrị inwe ọnụnọ.
Agaghị eweta LG G7 na Mobile World Congress 2018
LG agaghị ewepụta LG G7 na Mobile World Congress 2018. Chọpụta karịa gbasara mkpebi ụlọ ọrụ ahụ ga-eme ọtụtụ okwu.
Ndị a bụ nkọwa nke LG X4 Plus, mkpanaka nwere asambodo ndị agha
E gosipụtara LG X4 Plus maka South Korea yana asambodo ndị agha nke Ngalaba Nchebe nke United States nyere nke na-eme ka ọ ghara iguzogide ọnọdụ siri ike. Si ebe a Androidsis, anyị na-ewetara ya niile e ji mara na nkọwa.
LG CEO gaara arịọ ka emegharịa LG G7 site na ncha
LG CEO chọrọ ịchọ imegharị LG G7 site na ncha. Chọpụta ihe banyere nsogbu ndị ụlọ ọrụ na-enwe ugbu a.
LG Q6 Plus na Q6 Alfa adịworị ire na Spain
LG Q6 Plus na Q6 Alfa dị adị na Spain. Chọpụta ihe banyere ekwentị ọhụrụ dị n'etiti abụọ na LG.
Mmelite na-esote na YouTube App ga-enye nkwado maka ntanetị 18: 9 mgbe ị na-atụdo na ihuenyo
Guysmụ okorobịa nọ na LG agbasowo otu usoro ahụ dị ka Samsung, ha emegheela oge imechi iji malite ịnwale beta mbụ nke gam akporo Oreo na LG V30
LG V30 na-enweta ule ntachi obi kachasị ama
Chọpụta karịa JerryRigEvery ihe ntachi obi ule anyị ga-etinye LG V30. You ga-agafe ule ma ọ bụ na ị gaghị?
Nkuzi ebe m na egosi gị otu esi ebudata isiokwu n'efu maka LG G6, LG G5, LG V20, budata ha ma kuziere ha ka itinye ha n'ọrụ n'ụzọ ziri ezi.
LG ka ibu ibu emeputa ihe ngosi OLED
LG ga - abụ onye nrụpụta kachasị ukwuu nke mpempe akwụkwọ maka ekwentị ya n'ihi teknụzụ OLED ya nke ndị nrụpụta isi anọ ga - ebu
Ruo ọtụtụ ụbọchị, e chere na oghere f / 1.6 nke igwefoto LG V30 bụ mkpọsa mgbasa ozi n'ihi ọkwa dị iche iche wepụtara na weebụ.
LG V30, ihe ngosi izizi na IFA 2017
Ihe ngosi mbu mgbe anwalele LG V30, ihe ohuru ohuru nke LG nke puru iche maka ihe ngosi 6 nke anụ ọhịa ya na 18: 9 akụkụ
LG V30 na Samsung Galaxy Rịba ama 8 - Nyocha nyocha
Ugbu a na LG V30 bụ onye ọrụ gọọmentị, anyị na-eweta ntụnyere n'etiti Galaxy Note 8 na LG V30 ka ị wee nwee ike ịchọpụta isi ọdịiche ha.
Nke a bụ LG V30 ọhụrụ
South Korean LG na-ewepụta LG V2017 ọhụrụ na IFA 30, nnukwu ama ama ama ama ama ama ama iji nwee ọ contentụ na ọdịnaya ọdịnaya
LG V30 nwere ike ịbụ mkpanaka nwere ụda kachasị mma na ahịa
LG na-etu ọnụ maka sistemụ ụda nke ọhụụ ọhụrụ ya, LG V30, nke ga-eweta mgbawa ọdịyo HiFi Quad DAC, nzacha dijitalụ na nhazi.
Ruo mgbe LG V30 bịarutere, ị nwere ike ịmaraworị mkpanaka mkpanaka ahụ
A ka nwere ntakịrị ihe ruo mgbe mmalite nke LG V30, ọhụụ ọhụrụ Korea, mana maka ugbu a, ị ga - ahụ ihe ntanetị ga - adị.
LG V30 Plus, gosipụtara na ọ ga-eweta na August 31
A na-agbapụta usoro data sitere na LG V30 Plus nke na-egosi na ọ ga-adị ike karịa ụdị ihe atụ, na-apụ maka ncheta ya na ụda ya
LG V30 ga-abụ ama vidiyo vidiyo
LG V30 ga-aga n'ihu na-elekwasị anya na ịnyefe nnukwu vidiyo na ọdịyo site na itinye mmemme na ọrụ ọhụụ.
LG kwenyesiri ike na LG V30 ga-abata na ihuenyo 6 and ma belata okpokolo agba
Companylọ ọrụ South Korea LG mara ọkwa na LG V30 na-esote ga-enye 6-inch OLED ihuenyo na Corning Gorilla Glass 5 nchedo
LG V30 ọhụrụ a ga-aga ire ere na Septemba 28
Leak nke akwụkwọ LG dị n'ime na-ekpughe na LG V30 ọhụrụ ga-arụ ọrụ ụwa niile na Septemba 28, gụnyere Europe
LG V30: Ihe ọ bụla anyị maara nke ọma gbasara LG OLED mbụ mgbe usoro G Flex gasịrị
Ihe ohuru ohuru na-egosi ihe omuma di iche iche, ugwo na ubochi ahia nke LG V30 na-esote.
Companylọ ọrụ South Korea kpebiri ịgbatị akwụkwọ ikike na LG G6 mobiles ruo afọ 2, ọ bụ ezie na mmemme ọhụrụ a na-abịa na ndọghachi azụ.
Nkuzi vidiyo bara uru nke m na - akuziri gị otu esi emelite LG G3 na gam akporo 7.1.2 na ụzọ na - akwadoghị na ihe dị mma gam akporo Rom.
LG G7 nwere ike ịbata na onye enyemaka nke ọgụgụ isi ya
LG bidoro mmepe nke teknụzụ ya nwere ọgụgụ isi nke nwere ike ibido n'afọ ọzọ yana LG G7.
LG G6 Pro na Plus nwere ike ibido na June 27, V30 ga-abata na Septemba
Ọhụrụ LG G6 Plus na G6 Pro ga-ewepụta ọnwa a site na LG, nke mbụ nwere ikuku wireless Qi na nnukwu nchekwa dị n'ime.
Samsung na LG malite ụdị ọhụrụ nke Galaxy S8 na G6 ka ha na iPhone 8 nwee mpi
Samsung na LG ga-ebupụta ụdị ọhụụ nke Galaxy S8 na G6 iji nagide mwepụta nke iPhone 8, nke a na-ahazi maka Septemba afọ a.
Echiche ọhụrụ nke LG V30 na-arụtụ aka na ngwaọrụ nwere igwefoto azụ abụọ na ụdị nke LG G6, ihuenyo 5.7-inch + na ihuenyo nke abụọ na ndị ọzọ.
LG V30 ga - abụ LG izizi nwere ihu OLED
Igwe OLED dị egwu karịa LCD, nke mere LG ji kpebie ịmalite igwe izizi ya na OLED panel n'afọ a.
LG X Power 2 ga-emecha rụọ ọrụ na June
LG X Power 2, nke nwere batrị 4.500 mAh, ga-ebido na mbido June na South Korea, ọnwa atọ ka emechara karịa atụmatụ.
Anyị na-ekpughe 4 nke ọtụtụ nsogbu LG G6 na otu esi edozi ha. Nsogbu banyere igwefoto, nwayọ nwayọ, obere nnwere onwe ma ọ bụ enweghị arụmọrụ.
LG G6 na-etu ọnụ maka nnwale ntachi mbụ
LG G6 gafere igwe Rube Goldberg na ule ikpeazụ ya, ebe egosiputara njirimara ndị na-eme ka ọ ghara iguzogide ọdịda
LG G6, nke a bụ ihuenyo gị
Anyị na-egosi gị nkọwa niile nke nnukwu ihuenyo nke LG G6 nke pụtara maka inwe usoro 18: 9 na teknụzụ ọhụụ ọhụụ.
Nke a bụ ihe mgbasa ozi TV mbụ nke LG G6 dị
Mgbasa ozi telivishọn mbụ nke LG G6 dị ebe a ma ọ na - egosipụta ihuenyo 5.7 nke anụ ọhịa zuru oke nke ọnụ ya na usoro 18: 9.
LG Watch Sport, nche maka ọtụtụ ndị egwuregwu
N'iji ya tụnyere afọ ndị ọzọ, mbipụta ọhụrụ a nke Mobile World Congress adịtụla ka caffein. Ihe akaebe nke a bụ ...
Na vidiyo a anyị na-egosi gị nkọwa niile nke imewe LG G6, ekwentị na-eguzogide ọgwụ na ụjọ na ịda, na mgbakwunye na ịnwe IP68
LG Watch Style, nke a bụ ọhụụ LG ọhụụ
Anyị na-akọwa nkọwa niile nke LG Watch Style na vidiyo nke naanị nkeji 3. Igwe smartwatch na-adọrọ mmasị nke na-abịa na gam akporo Wear 2.0
Pricegwọ ọnụahịa nke LG G6 na Europe bụ nke a maraworị
N'ihi ndepụta sitere na MediaMarkt Germany anyị amataworị ọnụahịa gọọmentị nke LG G6 na Europe. Ọnụahịa nke LG G6 na Spain ga-adị ka ya.
iPhone 7 Plus na LG G6, duel ihuenyo
Nkọwa n'etiti ihuenyo nke LG G6 na nke iPhone 7 Plus. Ndi Dolby Vision teknụzụ nke na - ejikọ LG G6 kwesịrị ya?
LG G6, anyị nwalere ya na MWC 2017
Anyị nwalere LG G6 na MWC 2017, ekwentị nke na-eju anya na ihuenyo 6.7-inch ya na-enweghị akụkụ bezels yana igwefoto ya dị ike na akụkụ
LG G6 Vs LG G5, ihe dị iche doro anya !!
Na ntụle a LG G6 Vs LG G5, ntụle nke nnukwu ihe dị iche pụtara, anyị na-etinye ọkọlọtọ LG abụọ ihu na ihu.
Anyị enweela LG G6 ma eziokwu bụ na n'oge a, ọ tụrụ anyị n'anya
Anyị enweela LG G6 na oge a ndị mba Korea na-atụba anụ niile na grill na njedebe mara mma na njedebe kachasị elu na ihuenyo dị egwu
Firmlọ ọrụ South Korea LG na-akpọsa LG X Power2, smartphone dị ala ma nwee nnukwu batrị na-enye nnwere onwe sara mbara
LG G6 na-edozi na kenkowaputa nwa nwere nnukwu anya
LG G6 ga-enwe agba pụrụ iche nwere agba ojii nke na-egbu maramara ma ugbu a ka edechara maka nnabata ndị na-echere ya.
LG G6 tinyere n'akụkụ LG G5 na onyonyo ọhụrụ a
Ihe onyonyo a na-enyo enyo na-etinye anyị n'ihu LG G6 na LG G5 tinye n'akụkụ n'akụkụ iji gosipụta ọdịiche ha na-ahụ anya.
Ewezuga mgbochi mmiri nke LG G6, ọ ga-enwe usoro 18: 9 ahụ nke ga - enyere gị aka igwu ọdịnaya multimedia dịka ọ dịtụbeghị mbụ.
LG G6 ga-enwe kamera 13MP abụọ, nke nwere ogo ogo 125
LG G6 ga-enyekwa nnukwu uru na nhazi igwefoto ya abụọ, ha abụọ bụ 13MP na otu ịbụ akụkụ nke ogo 125.
Abụọ ọhụụ ọhụrụ dị elu na LG gosipụtara na Geekbench
Geekbench bụ ngwá ọrụ benchmarking nke na-enye ozi gbasara ngwaahịa abụọ nwere ọhụụ dị elu sitere na onye nrụpụta Korea LG.
LG na-etu ọnụ banyere mgbochi mmiri na ntụkwasị obi nke LG G6 na teaser ọhụụ
LG G6 gosipụtara dị ka otu n'ime kpakpando na-enwu nke Mobile World Congress 2017 nke a ga-enwe na njedebe nke ọnwa na Barcelona.
Ọ bụrụ na ị na-eche maka imelite ọdụ gị na LinageOS ị nwere otu ihe kpatara ya na nke ahụ bụ na LinageOS na-enye gị ohere igwu Pokemon Go.
LG G6 ga-enye ezigbo ụda dị mma
LG G6 ga - enwe usoro DAC anọ iji nye ụda dị mma karịa nke ndị asọmpi ya, jiri ụda dị mma ma dị mma.
LG G6 kwadoro iji mgbawa Snapdragon 821
Ebe ọ bụ na Samsung nwere nke Snapdragon 835, LG nọ n'ọnọdụ nke ijikọ Snapdragon 821 iji ruo MWC 2017.
Ihe ngosi ohuru LG G6 na-ekwu na ọ bụ 'obere ihe aka' na 'mara mma'
LG G6 ga-enwe ọ dayụ ụbọchị 26 nke ọnwa Febụwarị mgbe ewepụtara ya na Mobile World Congress na Barcelona. Anyị nwere teas ọzọ.
LG mara ọkwa Watch Sport na Watch Style na gam akporo Wear 2.0
Abụọ smartwatches abụọ a LG Watch Sport na Watch Style ga-egwu egwuregwu Android Wear 2.0 ma nwee naanị ya mgbe ọ ga-erute ndị ọzọ.
LG Watch Sport na Style ntuziaka onye ọrụ aka na-egosi Google Assistant na ndị ọzọ
Onye na enyere Google aka bu otu n’ime ihe nkenke nke Android Wear 2.0 dika egosiri na ntuziaka onye oru nke LG Watch Style and Sport.
LG na-egosiputa akụkụ dị n'akụkụ nke G6 na ọkpụkpọ oku maka MWC
LG na-eji okwu a "Nnukwu ihuenyo nke dabara" na oku nke G6 maka mmemme ngosi na February 26 nke ga-eme na MWC
LG Watch Style gosipụtara nhazi ya
Nlele ihu nke LG Watch Style, elekere nwere sistemụ okirikiri, agbapụla ma ga-eweta ya n'oge na-adịghị anya
Ihe ngosi ohuru nke LG G6, oge a site na mkpuchi
Otu n'ime ihe mkpuchi LG G6 na-enye anyị ohere ịbịaru nso ihe ọkọlọtọ a nke onye nrụpụta Korea na-enye anyị anya.
Google's LG Android Wear 8 smartwatches ga-amalite na February 2
Stdị Watch na Egwuregwu Egwuregwu si Google na LG na gam akporo Wear 2.0 ga-eweta na February 8, otu ụbọchị tupu ụbọchị emepụtara.
Ihe onyonyo ohuru nke LG G6 gosiri ya site n’akuku nile
Ihe onyonyo ohuru a gosiputara anyi LG G6 n’enweghi ihe nzuzo ma buru uzo kacha mma anyi huru taa rue mgbe anyi na-eche February 26.
A ezigbo onyonyo nke LG G6 ka edozichara na-akwado ihe na-egbuke egbuke na ese foto abụọ
Anyị nwere ezigbo onyonyo nke LG G6 ebe egosiri azụ na ngwụcha ojii ahụ na-egbu maramara yana nhazi ya abụọ na igwefoto.
Nkọwapụta nke LG G6 nkọwa nwere ike ịbawanye ọnụahịa ya site na dollar 50
Dabere na asịrị ọhụrụ, LG G6 ga-efu 50 euro karịa naanị n'ihi ihe mejupụtara ọkọlọtọ ọhụrụ ahụ
LG debara aha 'G6 Compact', 'G6 Lite' na ndị ọzọ
Ndị a dị ka ụdị ọhụrụ nke LG G6 dịka ọ ga-abụ kọmpat na Lite, ọ bụ ezie na egosiri na ha nwere ike iweta "ndị enyi" na G5.
Nke a ga - abụ LG ọzọ gam akporo Wear smartwatch
Gam akporo Wear 2.0 ga-abụ mmelite kasịnụ nke wearable platform na LG Watch Style ga-abụ otu n'ime ndị na-akwado ya.
LG G6 na-agbapụ ọzọ na onyogho ọhụrụ
LG G6 yiri ka ọ ga-aga nke ọma n'afọ a site na imepụta ihe dị iche na LG G5 na Google Assistant nke ga-abụ isi nke ekwentị.
Ndị a bụ aghụghọ abụọ iji melite arụmọrụ LG G3 na-enweghị ịbụ onye ọrụ mgbọrọgwụ ma dozie nsogbu nke LG G3 opekata mpe ruo mgbe mmelite gọọmentị na-edozi ha.
Taa, anyị na - egosi gị usoro otu ị ga - esi melite LG G3 na gam akporo 7.1.1 Nougat, tinyere vidiyo nkọwa na njikọta na ihe niile ịchọrọ iji nweta ya.
LG G6 ga-eme ihe izizi ya na ngwụcha ọnwa Febụwarị, mana ọnweghị mgbawa Snapdragon 835
LG G6 nwere ike ịdabere na Snapdragon 821 mgbawa site na ịnyefe na Snapdragon 835, nke yiri ka ọ bụ naanị na Galaxy S8.
Egwuregwu LG Watch na Watch Style na Wear gam akporo 2.0 pụtara na onyonyo pịa
Ihe onyonyo nke LG Watch Sport na LG Watch Style abịawo iji gosipụta atụmatụ nke uwe abụọ ndị a nwere gam akporo Wear 2.0.
Taa, anyị na-akụziri gị imelite LG G2 na gam akporo 7.1.1 na ezighi ezi na ekele maka ọrụ Rom nke ọrụ LnageOS ma ọ bụ ihe bịara Cyanogenmod.
LG G6 ga-enwe Google Assistant dị ka isi kpakpando na sọftụwia ahụ
LG G6 nwere ike inwe nnukwu atụmatụ na sọftụwia ahụ site na ịnwe Google Assistant na igba egbe. Omume ọma niile na-eto ya.
Ghostek na-egosi nhazi nke LG G6 na otu nke mkpuchi ya
Ghostek, onye na-emepụta ikpe gbasara ekwentị, ebipụtala na LG G6 na webụsaịtị ya, nke gosipụtara akụkụ nke atụmatụ ahụ.
LG G6 ga-ebu ya teknụzụ ọhụụ nke nwere obere ọkpọkọ na-ewepụta okpomọkụ iji gbochie oke ọkụ.
LG nwere otu ọnwa ya LG G6 iji gosipụta na ọ nwere nnukwu ọnụahịa gam akporo nwere ike tụọ na ihu na ihu na Galaxy S8.
LG G6 na-abụghị nke modula pụtara na ọ dị ọnụ ala karịa imepụta ya
LG G6 nwere ike inwe nnukwu uru site na ịkesa ya na akụkụ ndị na-abụghị nke modular, ebe ọ bụ na nke a na - eme ka ọ ghara ịdị ọnụ ala ịmịpụta.
LG G6 bụ ọnụ na-atụ anya na ọ ga-emezue adịghị ike nke LG G5. Ọ nwere ike ịnwe otu iko na nkwụnye ụgwọ ikuku.
'Szọ LG abụọ na-eju anya maka ọdịyo
LG ga-eweta na CES 2017 nzọ abụọ dị ịtụnanya dị ka ngwaahịa ndị metụtara ọdịyo: ọkà okwu a na-ebugharị nke na-agbapụ agbapụ na olu olu nwere ike iru
A na-ewepụta nsụgharị mbụ nke LG G6 nke na-egosi nhazi a maara
LG G6 ga-abata na nkeji iri na ise nke afọ 2017 ma ugbu a, anyị nwere onyinyo ngosipụta nke etu atụmatụ ya ga-adị.
LG G6 nwere ike ibata tupu atụ anya ya
Iji merie ezi uche nke 2016, ụlọ ọrụ LG na-ezube ịkwalite mwepụta nke LG G6 iji buru ụzọ na Samsung.
LG na-ekwuwapụta ekwentị 5 ọhụrụ K gụnyere ekwentị Stylus 3 na Nougat
LG na-ekwuputa ekwentị ọhụrụ 5 site na usoro K na Stylus 3. Abụọ n'ime ha na-abata na Android Marshmallow na ndị fọdụrụ atọ na Nougat.
LG Partners na Apple na Google mepee paneli OLED
Mpịakọta akwụkwọ OLED nwere ike iburu nnukwu ọrụ na 2017 ịmara na LG abanyela nkwekọrịta ya na Apple na Google.
Ihe mmelite Nougat gam akporo 7.0 maka LG G5 dị ugbu a na Spain
LG ekwuputala mmelite ya na gam akporo 7.0 nke LG G5 nke enwere ike ibudata site na mmemme LG Bridge site na webụsaịtị gọọmentị.
LG G6 ga-abụ mmiri na-enweghị mmiri ma nye nkwado maka ikuku ikuku
Ọ bụrụ na anyị mara nkọwa ndị ọzọ gbasara Samsung Galaxy S8 nke Samsung taa, ọ na-emetụ LG G6 na nkwado ya maka ikuku na-akwụ ụgwọ na mmiri na-eguzogide.
LG dị njikere ịmalite smartwatches ọhụrụ 4 na usoro ịkwụ ụgwọ
Ihe ngosi ohuru ohuru na LG Watch Pay bụ aha ndị edebanyere aha ha na usoro ịkwụ ụgwọ maka 2017.